ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပြည်. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ပဲခူးတိုင်းဒ
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပြည်. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ..